ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ - ၂၅ ရက်နေ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်
19 ส.ค. 2562 - 03:29 น.
ဤသီတင်းပတ်တွင် သင်လာဘ်အဖြစ် ပစ္စည်းတခုဝင်မည်။ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကျယ်ပြန့်လာမည်။ ချစ်သူမရှိသေးသောသူများ ချစ်သူကို အခက်အခဲ မရှိဘဲ ရမည်။ လူကြီူသူမနှစ်ဖက်လုံး၏ ပံ့ပိုးမှု ရမည်။ ညီအကိုမောင်နှမ တချို့ သဘောမတူပါ။ အကြွေးနှင့် အရောင်းအဝယ်များ
အရှုံးရှိမည်။ စာအုပ်ငှးသွားသူရှိလျင် ပြန်မရနိုင်ပါ။ အမှန်တရားကို ရဲရင့်စွာ ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် စိတ်ထားရှိနေသည်။ လက်ရှိနေရာတွင် ဝင်ငွေကောင်းနေမည်။ အတွေးအခေါ်လဲလှယ်ပြောဆိုခြင်းများ ရလဒ်မကောင်းပါ။
ဤသီတင်းပတ်တွင် သတင်းကောင်းများသာ ကြားနေရမည်။ ငွေကြေးဝင်မည်၊ လာဘ်ရမည့် သတင်းများရမည်။ အများအကျိုးအတွက် သင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ရပ်အတွက် အထူးချီးမွမ်းခြင်း ခံရမည်။ အခြားသူများ၏ ပြောဆိုခက်များအပေါ် သိပ်မယုံပါနှင့်။ မြစ်ချောင်းပင်လယ်များအနီးသွာယလျင် အန္ဓရာယ်ရှိသည်။
လက်အောက်ငယ်သားများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုမှုကြောင့် အရိုအသေတန် တတ်သည်။ မိမိ၏လှို့ဝှက်ချက်များ ဝင်ငွေများအကြောင်း အခြားသူများကို မပြောရ။ သူများ၏ယာဉ်ဖြင့် ခရီးမသွားရ။ အဆင်မသင့်ခဲ့ဘူးသော ဦးလေး အဒေါ် အကို အမများနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်မည်
ဤသီတင်းပတ်တွင် ဟိုဟိုဒီဒီ အသွားအလာ များလာမည်။ လွတ်လပ်စွာပြောခွင့် လုပ်ကိုင် ခွင့် ရှိနေမည်။ လိုအပ်သည့်သူများကို ပြောဆိုကူညီပေးနေမည်။ မည်သူနှင့်မဆို မိတ်ဖြစ်မည်။ မိမိက ရိုသေလေးစားရမည့်သူ မမြင်တွေ့ရသေးပါ သို့မဟုတ် လူ့ကျင့်ဝတ် နည်းပါးသူများနဓင့် တွေ့ရတတ်သည်။ အရင်နှင့် လုံးဝမတူတော့သည့် ဘဝသစ် စရတတ်သည်။ ချောင်းဆိုးနှာစေးခြင်း
အစာသီးခြင်းတို့ကြောင့် နေမကောင်း ဖြစ်မည်။ ဝါသနာရလုပ်သောအလုပ်က အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ထက် ပိုကောင်းမည်။ ချစ်သူဟောင်းနှင့် ကွေကွင်းရသူများ ပိုကောင်းသည့် အချစ်သစ်ရမည်။
ဤသီတင်းပတ်တွင် လုပ်ငန်းကောင်းများ ရှိနေမည်။ တပည့်များ၏ အကူအညီရမည်။ အိမ်တွင်ရော အလုပ်မှာပါ အလုပ်လျှောက်သူများရှိမည်။ အလုပ်သစ် များမှ အကျိုးစီးပွားကောင်း ရမည်။ အလုပ်များများလုပ်နိုင်မည်။ ပစ္စည်းများ ကျိုးပဲ့ပျက်စီးမည်။
ခလေးသူငယ်များကို ဆုံးမလျင် ကိုယ်ကာယအသုံးပြုပါက လက်လွန်မည်။ လွတ်လပ်ခွင့် ကစားခွင့်ပိတ် သည့် ဒဏ်မျိုးသာပေးပါ။ ညီညီမများ ခလေးများ၏ ပညာရေးကို အလေးပေးနေမည်။ တပည့်များ အချင်းချင်း ချစ်သူဖြစ်ကြချင်း လက်ထပ်ချင်းများ ရှိမည်။ ခလေးများ လူကြီစကားနားမထောင်ဘဲ ဆိုးနေမည်။ အလုပ်ကိုသာလုပ်နေ၍ ကိုယ်ကာ ယနွေးထွေးမှုနည်းပြီး နေမကောင်းဖြစ်မည်။
ဤသီတင်းပတ်တွင် ပစ္စည်းများပျောက်မည်။ စိတ်ဆိုးလျင် ပိုပျောက်မည်။ တပည့်များက ရှာလာပေးမည်။ အိမ်စေများကို ပစ္စည်းများသွားပေါင်ခိုင်းပါက ကောင်းမည်။ အလုပ်ရှာသူများအတွက် အခွင့်ကောင်း နီးပါပြီ။ ငွေဝင်မည်။
မည်သူ့အတင်းမျှ မပြောပါနှင့်။ အလုပ်သစ်ကိုမိတ်ဆက်သူများ လုပ်နည်းကိုင်နည်း ညွှန်ပြသူများရှိမည်။ ရင်းနှီသူများထံမှ အဆက်အသယ်ဖြင့် အလုပ်လာလျှေက်သူ များနေသောကြောင့် ရွေးရန်ခက်နေမည်။ အပြောလွန်၍ ပြဿနာဖြေရှင်းရန်ခက်မည်။ အိမ်ပြင်ရန်ကောင်းပါသည်။
ဤသီတင်းပတ်တွင် စိတ်မကျေနပ်မှုများ ရှိမည်။ ဆန္ဒပြည့်ဝမှုမရှိသော ငွေဝင်မည်။ ငွေဝင်လာစဉ် အလှူငွေဖြတ်ခံရခြင်းမျိုး ဖြစ်မည်။ လူကြီးသူမများ ဆရာသမားများ၏ နှစ်သက်မှု ရမည်။ ဆွေမျိုးများမှ ၎င်းတို့၏ သားသ္မီးများ မင်္ဂလာဆောင်ကို ကြီးကြပ်ပေးရန် အကူအညီတောင်းမည်။
အကြွေးများပြန်မရသေးပါ။ ပျောက်သောပစ္စည်းများလည်းပြန်မတွေ့သေး ပါ။ အဝေးရပ်မှဆွေမျိုးများ လာရောက် လယ်ပတ်ပြီး ၎င်းတို့ဆီမှ လာဘ်ရမည်။ ထီပေါက်တတ်သည်။ ခရီးသွားရန် အစီအစဉ် မလုပ်နိုင်သေးပါ။ ချစ်သူအိမ်ထောင်ဖက်မှ သူ့ဆွေမျိုးများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးမည်။ သင့်တင့်စွာနေပါ။ မည်သူနှင့်မှ ပြဿနာမရှိပါ စေနှင့်။
ဤသီတင်းပတ်တွင် အပါင်းအသင်းများ၏ ကူညီမှုဖြင့် လုပ်ငန်းများအောင်မြင်မည်။ အလုပ်သစ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား စနိုင်မည်။ အလုပ်တွင် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်များ၏ အကူအညီရမည်။ ဆွေမျိုးများထံမှ ငွေကြေး အလုံးအရင်းနှင့် ကူညီမည်။ တုံပြန်စရာ မလိုသော ကူညီမှုမျိုးရမည်။
အခက်အခဲ လုံးဝမရှိပါ။ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်တပည့်များ အရှုပ်အထွေးအနည်းငယ်ပေးမည်။ လူစိမ်းများ အိမ်ဝင်းအတွင်း မသိမသာ ဝင်လာနေမည်။ အကျိုးစီပွားအားလုံး ထင်မှတ်သည်ထက်ကောင်းမည်။ အာဏာသုံးပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းရာတွင်လည်း ကောင်းသည်။ ဆွေမျိုးများ လာရောက်အလုပ်လုပ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာမှုများရှိမည်။
ဤသီတင်းပတ်တွင် အချို့အလုပ်များ စကောင်းလာမည်။ ပြဿနာများ တဖြေးဖြေး နဲသွားမည်။ နောက်ဆုံး အံ့အားသင့်ဖွယ် ချစ်သူတွေ့မည်။ အလုပ်တွင်လည်း အံ့အားသင့်ဖွယ် များတွေ့ရှိနိုင်သဖြင့် စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။ ကြမ်းတမ်းသော အပြုအမူကြောင့် စိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်သည်။ သံသယရှိသောလာဘ်ကို လက်မခံပါနှင့်။ အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်သည်ထက်ပိုလုပ်ခြင်း၊
အစာစားချိန်မမှန်ခြင်း၊ အနားယူနဲခြင်း တို့ကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မည်။ ဆရာသမား လူကြီးသူမများနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိမည်။ သံသယရှိသော ပစ္စည်းများကို မဝယ်ပါနှင့်။ ညဖက်လယ်ခြင်း မလိုအပ်ဘဲ အပြင်ထွက်ခြင်းများ အန္ဓရာယ် ရှိသည်။ အမြင့်တက်လျင် လိမ့်ကျမည်။
ဤသီတင်းပတ်တွင် ခရီးဝေးသွားရန် အကြောင်းများရှိသော်လည်း သတင်းကောင်း မရှိပါ။ စိတ်ဆိုးတတ်ခြင်း ကိုထိမ်းချုပ်နိုင်လျင် အလွန်ကောင်းသည်။ စိတ်မထိမ်းနိုင်ပါက ဆုံးရှုံးမှု များမည်။ လူကြီးများက သင့်ဆင်ခြေကို လက်မခံပါ။ အရက်သေစာ မသောက်စားရ။ ဦးလေးအဒေါ်များထံမှလာဘ်ရမည်။ အချို့လာလယ်မည်။ အချစ်ရေး၌ တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း ရှောင်ပါ။ ပညာရေး အက်အခဲအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း ကောင်းပါသည်။ အကြောင်းအကျိုးမတွေ့ဘဲ အသုံးစားရိတ်များနေမည်။ လောင်းကစား ရှောင်ပါ။
ဤသီတင်းပတ်တွင် တပည့်များနှင့် အမြင်မတူသောကြောင့် စိတ်ညစ်နေမည်။ အိမ်ထောင်ဖက်မှ စိတ်ဝင်စားသော်လည်း သင်သဘောမကျ၍ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံရန် ခက်နေမည်။ နောက်ဆုံးအများအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ ဘာမဆို ကြောက်ရွံ့ အားနာမှု မရှိဘဲ ရဲရဲရင့်ရင့် လုပ်ဆောင် နိုင်မည်။ လက်နက်များ မကိုင်ရ။ တပည့်များက ပျော်ရွှင်ဖွယ်များ ပြောမည်။ ဝေးကွာနေသောဆွေမျိုးများ လာလယ်ပတ် မည်။ ငွေကြေးကိစ္စ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ချ၍မရသေးပါ။ သူငယ်ချင်းများ ငွေချေးပြီး လုပ်သောအလုပ်များ ရှုံးမည်။
ဤသီတင်းပတ်တွင် လူများလာသောကြောင့် အိမ်ကို အရင်ကထက်ပို၍ ပြင်ရမည်။ အိမ်ဆောက်လုပ်ရေးမှ ဝင်ငွေကောင်းမည်။ မောင်နှမများ စကားပြောမှား၍ စိတ်ဝမ်း ကွဲမည်။ တန်ဘိုးရှိပစ္စည်း အခြားသူထံ အပ်ထားလျင် ဆုံးတတ်သည်။ အလုပ်ပြောင်း လျင် ဝင်ငွေနည်းသွားမည်။ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင် လူကြီးသူမများထံမှ လာဘ်ရမည်။ အသုံးစားရိတ် ကျပ်နေမည်။ မြေကို မလိုလျင် မဝယ်ပါနှင့်။ တပည့်များ ဝင်ငွေကောင်ပြီး ပျော်ရွှင်ပွဲများလုပ်ကြမည်။
ဤသီတင်းပတ်တွင် ငွေကြေးနှင့် အချစ်ရေး ကံကောင်းနေမည်။ လူအများစိတ်ဝင်စားသူက သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားမည်။ သူတပါး၏ အချစ်ရေးကို ဝင်ရှုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရမည်။ ဆေးများ အားဆေးများ ဝယ်လာပြီး မသောက်ဖြစ်ပါ။ အလုပ်တွင် အကျိုးရှိသည့် စာရွက်စာတမ်းများရမည်။ သူများအကြောင်း ကြားသိရသည်များ ယုံရ မယုံရဖြစ်နေမည်။ အချို့သူငယ်ချင်းများနှင့် စိတ်ဝမ်းကွဲမည်။ ငွေကြေးစိမ့်ယိုပြီး သူများထံရောက်သွားမည်။ အနာဖြစ်လျင် ပျောက်ရန်ခက်မည်။ အိမ်တွင် ရေပြတ်မည်။ ခရီးသွားလျင် အနှောက်အနှက်မရှိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားရမည်။ တွေ့ဆုံရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားမှုများ အခက်အခဲရှိမည်။
อัลบั้มภาพ ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ - ၂၅ ရက်နေ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်